Marka laga hadlayo dadaallada samafalka iyo dhacdooyinka, marathons waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu caansan ee halkaas ka jira. Maratoonku wuxuu u oggolaanayaa orodyahannada inay muujiyaan awooddooda, kartidooda iyo u heellankooda sadaqadooda ama kafaalaqaadaha xulashada alaabada maaratoonka caadada ah. Ma jiraan wax qu ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay Dharka Ilaalinta Qorraxda? Waa maxay daaweynta UPF?
Haddii aad tahay bad-mareen firfircoon, biyo-doon ama biyo-biyood, waxaad u badan tahay in lagaa cawday inaad mar kasta oo aad jeedsato ku sunto qoraxda. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad dib u mariso shaashadda qorraxda labadii saacba mar ama wixii la mid ah - gaar ahaan haddii aad tuwaalka iska xirto, dabaashaAkhri wax dheeraad ah »
Waa maxay dharka saddex-geesoodka ah? Maxay caan u tahay?
Waa maxay sababta funaanadda saddexda ah ee quruxda badani u kulul tahay? Markuu macmiilkaygu raadsado talo ku saabsan xulashada shay uu sameeyo shaadh caadi ah, waan hubaa inaan ku taliyo. Haddii aad i weydiin lahayd sababta, waxaan kuu sheegi lahaa in shayga 'triblend tee' uu yahay waxa ugu jilicsan ee aad waligaa taaban doonto. Sida laga yaabo inaad qiyaastay f ...Akhri wax dheeraad ah »